Markii Uu Dhammaado ShidaalKa Qorraxda..Maxaa Dhulka Ku Dhacaya? | Xaqiiqonews
Markii Uu Dhammaado ShidaalKa Qorraxda..Maxaa Dhulka Ku Dhacaya?
Qoraxda ayaa ah halbowlaha gubanaya kaasi oo shidaalka siiya nidaamka cadceeda( solar system), laakiin sida ay saadaalinayaan khubarada shidaalka xiddigan oo sii dhammaanaya ayaa gabi ahaanba la waayi doono qiyaastii 5 Bilyan oo sano ka dib.
Markii sidaasi ay dhacdo, qorraxda ayaa mari doonto nidaam “burbur ah”, waxa ayna ka soo bixi doontaa dhinaca kale iyada oo yar oo u muuqata sida mid cawiran.
Intaasi ka hor, marka qorraxda ay mareyso nidaamka dhexe ee loo yaqaan “Casaanka Weyn” kolkaasi oo qoraxda ay isku badali doonto gaduud, ayaa noqon doonto xaalad walwal abuuri doonto, si kasto oo noolashu ay noqoto balaayiin sano ka dib.
Dr Mark Morris oo ah bare cilmiga xiddigiska ka dhiga jaamacadda Kalifoorniya waxa uu leeyahay “saadaasha waxa ay tilmaameysaa in 5 bilyan oo sano ka dib qoraxda ay barari doonto oo ay noqon doono “gaduud weyn”
Sidoo kale Aqri: Naagtii Faalisa Rer Bulgeria Oo Sanadka 2021 Cudur Cusub Saadaalisay
Sidaasi oo ay tahay gaduudka weyn ma noqon doono mid u kulul sida qorraxda maanta.
Morris waxa uu leeyahay “xiddiga sidaas u weyn waxa uu noqon doono mid lala yaabo, maxaa yeelay waa qabow, gaduud kulul ama gaduud, buluug kulul ama jaalle u kulul sida qoraxdeena oo kale.
Saynisyahanada ayaa aaminsan in casaanka weyn uu sababi doono hawo taasi oo keeneysa in qoraxda uu dibadda uga soo baxo boor badan, markaasi oo la arki doono qoraxda oo cawiran kana soo baxeysa dhinaca kale.